ESI MEE KA H264 TỌGHARỊA AVI - ỤDỊ FAỊLỤ - 2019
Biputa vidiyo si na H.264 ka AVI
Site na ịdenye aha mkpado gaa na vidiyo vidiyo, ị na-ele ya anya dị ka o kwere mee maka ịchọ na ịnweta ndụmọdụ maka ụfọdụ ndị ọrụ. Ihe ndị na-ekiri adịghị ahụ maka ihe ndị na-ekiri, Otú ọ dị, ọ bụ n'ihi na ha na-achọgharị bot ma na-atụ aro ha maka ilele. Ya mere, ọ dị mkpa ịgbakwunye mkpado gaa na vidio ahụ, ọ bụghị naanị na-eme ka ha dị mma, kama ọ na-adọta ndị ọhụrụ na-ege ntị na ọwa ahụ.
Nchịkọta zuru ezu nke weebụsaịtị YouTube na-enye ndị dere idezi ma mee ka ndị ọzọ jiri vidiyo ha mee ihe n'ụzọ ọ bụla. Nke a na-agụnye mgbakwunye na nkebi ahịrịokwu. Ụlọ ọrụ na-emepụta ihe dị mma na nwelite ọ bụla, mgbanwe nhazi na atụmatụ ọhụrụ pụtara. Ka anyị lebakwuo anya na usoro nke ịgbakwunye mkpado gaa na vidio ahụ site na nsụgharị nke saịtị ahụ na kọmputa ahụ:
Pịa na avatar nke ọwa gị ma họrọ "Creative Studio".
N'ebe a, ị hụ obere mpaghara na vidio na-adịbeghị anya. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa ebe a, gaa ozugbo ịgbanwe ya, ọ bụrụ na ọ bụghị - meghere "Onye nchịkọta vidiyo".
Gaa na ngalaba "Video"chọta ntinye kwesịrị ekwesị wee pịa bọtịnụ ahụ "Gbanwee"nke dị nso na mpempe akwụkwọ mkpanaka.
Pịgharịa gaa na menu ma n'okpuru nkọwa ị ga-ahụ akara "Tags". Tinye isiokwu site na ịpị ha. Tinye. Ọ dị mkpa ka ha kwekọọ na isiokwu nke vidiyo ahụ, ma ọ bụrụ na e nwere ihe nwere ike igbochi ndekọ site na nchịkwa saịtị.
Mgbe ị pinye igodo ahụ, echefula ịchekwa mgbanwe. A ga-emelite vidio ahụ ma tinye aka na ya.
Ị nwere ike mgbe ọ bụla gaa na ntinye vidiyo, tinye ma ọ bụ hichapụ igodo ndị dị mkpa. A na-eme usoro a ọ bụghị naanị na vidio ebudatara, kamakwa n'oge mgbakwunye nke ọdịnaya ọhụrụ. Gụkwuo banyere vidio vidio na YouTube na isiokwu anyị.
Na ngwa ngwa YouTube ọ ka na-enweghi ebe nchekwa zuru ezu, ebe ọrụ nile achọrọ maka ịrụ ọrụ na ọdịnaya ga-adị. Otú ọ dị, e nwere ihe ndị bụ isi, gụnyere ịgbakwunye ma na-edezi mkpado. Ka anyị lebakwuo anya na usoro a:
Mwepụta ngwa ahụ, pịa na avatar nke ọwa gị ma họrọ "Ọwa m".
Pịa taabụ "Video", pịa akara ngosi ahụ n'ụdị oghere vertical atọ n'akụkụ vidiyo achọrọ ma họrọ "Gbanwee".
A ga-emepe windo ntinye data ọhụrụ. Nke a bụ eriri "Tags". Kpatụ ya iji mepee keyboard onscreen. Ugbu a tinye mkpụrụokwu ndị a chọrọ, na-ekewa ha site na ịpị igodo ahụ "Emere"kedu ihe dị n'elu keyboard.
N'aka nri nke ederede "Gbanwee data" Enwere bọtịnụ, pịa ya mgbe ị banyere na mkpado ma chere ka vidiyo ahụ melite.
Dị ka nsụgharị nke YouTube na kọmputa gị, ịgbakwunye ma wepụ mkpado dị mgbe niile na ngwa ngwa. Ọ bụrụ na ị gbakwunyere isiokwu dị iche iche na YouTube, nke a agaghị emetụta ngosipụta ha n'ụzọ ọ bụla, a na-emekọrịta ihe niile n'otu ntabi anya.
N'isiokwu a, anyị lere usoro ntinye vidiyo na YouTube na kọmpụta na ngwa ngwa. Anyị na-akwado ịbịakwute ha n'ụzọ amamihe, chọpụta akara aka na vidiyo ndị yiri ya, nyochaa ha ma họrọ ihe kachasị mma maka ọdịnaya gị.